qaaqan Man'eewwan saagu kan ati akkaataa man'eewwan haaraa gara filannoo kennameetti bani. Gulaaluu-Man'eewwan haquu filachuudhaan man'eewwan haquu dandeessa.
Naannoon kun filannoowwan man'ee gara wardiitti saaguuf gargaaran of keessatti qabata.
Man'eewwan gad jijjiiri
Yeroo man'eewwan saagaman,qabeentota hangii filatamanii gara gadiitti hiiqsa.
Man'oota Gara Gaditti Saagi
Man'eewwan mirgatti jijjiiri
Yeroo man'eewwan saagaman,qabeentota hangii filatamanii gara mirgaatti hiiqsa.
Man'oota Gara Mirgatti Saagi
InsertsTarree hunda saaga.Bakki tarree filannoo wardii irratti taasifamuun murteeffama. Lakkofsi tarreewwan saagamanii baay'ina tarreewwan filatamanii irratti hundaa'a.Qabeentootni tarreewwan xabboo gara gadiitti hiiqu.
Tarjaa hunda saaga.Lakkoofsi tarjaawwan saagamuuf jiranii, lakkoofsa tarjaawwan filatamaniidhaan murtaa'a. Qabeentootni tarjaawwan xabboo gara mirgaatti jijjiiramu.
Title is: Man'eewwan Saagi